Ambohimangakely – Midi Madagasikara
SAF/FJKM : Pour la promotion des droits et l’éducation sexuelle
Redaction Midi Madagasikara 15 avril 2014 Ambohimangakely, Ambohitrakely, France, Isoavimasoandro, IST, Mahatony, malgache, MFPF, SAF/FJKM, VIH/Sida
Et oui, le SAF/FJKM ne pense qu’au bien de la population malgache en ne négligeant aucun domaine, malgré le fait que ce soit une association religieuse. La réalisation du projet relatif à la promotion des droits et de la santé en matière de sexualité et d’égalité des sexes, qui cible surtout les populations défavorisées de…
Ambohimangakely : Valo lahy nanafika, lasa ny vola sy ny coffre
Redaction Midi Madagasikara 13 février 2014 Ambohimangakely, basy PA, coffre, VATRO
Ny alarobia 12 febroary vao mangiran-dratsy tamin’ ny iray ora maraina no tonga nandroba tao amin’ ity tokantrano iray ireto olon-dratsy . Ny varavarankely no nopoirin-dry zalahy ary nisy tamin’ izy ireo no nitondra basy kilalaon-jaza , tsy nahahetsika ny tao an-trano koa dia nanarampo ireto mpanafika.Lasa tamin’ izany ny vola mitentina 200 000 ar, solosaina iray,…
Ambohimangakely : Lehilahy iray hita faty
Redaction Midi Madagasikara 29 janvier 2014 Ambohimangakely, Lehilahy hita faty
Efa fotoana elaela no tsy hita izay nalehan’ity olona iray ity. Omaly no nisy nahita tany anaty « carrière » fangalana vato ny fatiny. Ny loharanom-baovoa no nahafantarana fa tsy nisy ratra hita nivantana teny amin’ny tenany. Ny vaovoa hatrany no nahafantarana fa tsy dia salama saina loatra io olona io. Tamin’ny 1 ora maraina izy no…